किन प्रदीपले 'भैरवी' मा खेल्न मानेनन्? | Suvadin !
निर्माता सुबास गिरीले निर्माण गर्न लागेको फिल्म 'भैरवी' को लिड रोलमा प्रदीपलार्इ लिने पक्का गरेपनि उनलार्इ यस फिल्मबाट हटाइने बताइएको छ। उक्त फिल्म साइन गर्दा उनले निर्माता गिरीसँग 'रोज' बाहेक अरु फिल्म तत्काल नगर्ने सम्झौता गरेका थिए।
Sep 24, 2018 13:27
काठमाडाैं, ८ असोज – चकलेटी ब्वाई प्रदीप खड्काको फ्यान फलोइङकै कारण पनि उनीसँग फिल्म बनाउन धेरै निर्माता/निर्देशकको लाइन लागेको हुन्छन्। तर, स्रोतका अनुसार 'कृ' निर्माता सुबास गिरीले निर्माण गर्न लागेको फिल्म 'भैरवी' को लिड रोलमा प्रदीपलार्इ लिने पक्का गरेपनि उनलार्इ यस फिल्मबाट हटाइने बताइएको छ।
यस फिल्मको हिरोइनमा साम्राज्ञी आरएल शाहलार्इ लिने मौखिक समझदारी पनि साम्राज्ञीले कार्य व्यस्तताको फिल्म नगर्ने भएपछि अभिनेत्री जसिता गुरुङलार्इ नायिकाको भूमिकामा लिने भएका छन्।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, उक्त फिल्म साइन गर्दा उनले निर्माता गिरीसँग 'रोज' बाहेक अरु फिल्म तत्काल नगर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर, उनी हालै फिल्म 'लभ स्टेशन' मा अनुबन्ध भए। 'भैरवी' निर्माताले प्रदीपको विकल्प खोज्न थालेको चर्चा छ। र, प्रदीपको ठाउँमा अभिनेता पल शाह हुने सम्भावना बलियो छ।